Kenya oo khasaari doonta Malaayiin Dollar, haddii ay albaabadda u laabaan Xeradda Qaxootiga ee Dhadhaab – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kenya oo khasaari doonta Malaayiin Dollar, haddii ay albaabadda u laabaan Xeradda Qaxootiga ee Dhadhaab
Dowladda Kenya ayaa la hadal-hayaa inay ka laaban doonto go’aanka ay ku sheegeen in Qaxootiga Soomaalida muddo saddex bilood gudaheeda laga daad-gureeyo Xeradda Dhadhaab oo ah Xeradda ugu ballaaran Caalamka.
Wasiirka Maaliyadda Kenya, Henry Rotich ayaa horey u sheegay inaan lagu degdegin xirista Xeradda Dhadhaaab , iyadoo ay dhici karto inay Dowladda Kenya ku waayi doonto lacag dhan 10-BILLION oo Shillinka Kenya sannadkiiba
Dowladda Maraykanka oo ah Malageliyaha Koowaad ee Hay’adda cuntadda Adduunka ee WFP waxay bishiiba bixiyaan miisaaniyad dhan 1 BILLION oo Shillinka Kenya, oo lagu kaharaj gareeyo iibinta iyo rarka raashinka la siiyo Qxaootiga ku nool Xeradda Dhadhaab.
Waaxda Arrimaha Qaxootiga ee “The Department of Refugee Affairs (DAF) “ayaa sheegtay inay Dowladaha Australia iyo Denmark kharaj badan ku bixiyaan Daryeelka Rubuc milyanka Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Xeradda Dhadhaab.
Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) waxay Xeradda Dhadhaab sannadkiiba ku kharaj gareeyaan 4 BILLION oo Shillinka Kenya.
Hay’adaha Samafalka ee ku sugan Xeradda Dhadhaab, waxay inat badan qalabka ay u baahan yihiin ka iibsadaan gudaha Kenya, iyadoo Xeradda Dhadhaab noqotay Suuq diyaar u ah Kumanaaan Wax-soo-saarayaal oo badeecadahooda u iib geeya Xeradda dhadhaab.
In ka badan 50 gawaarida xamuulka ayaa toddobaad kasta gaara Xeradda Dhadhaab, kuwaasi oo Badeecooyin kala duwan ka soo daabula magaalladda Nairobi iyo Dekedda Mombasa.
Saraakiisha Hay’adda UNHCR waxay tilmaameen inay Dowladda Kenya lumin doonto Kharajka fara badan ee ay ka helaan Miisaaniyadda Xeradaasi.
Xeradda Dhadhaab waxaa kaloo u xoogsi taga in ka badan 10,000 oo shaqaale oo banakooda Kenyaati ah.
Dhinaca kale, Waaxda Arrimaha Qaxootiga ee “The Department of Refugee Affairs (DAF) “ayaa tilmaamay inaysan Dhadhaab ahayn Xero Qaxooti oo caadi ah, balse ay tahay Xarun Weyn oo Ganacsi “A big business centre” oo ay taageero ka helaan Kumanaanka Qaxootiga ku nool , Shaqaalaha iyo dadka Deegaanka.
Si kastaba ha ahaatee, Hay’adda UNHCR ayaa qorsheynaysa haddii ay Kenya ku adkeystaan in la xiro Xeradda Dhadhaab in Miisaaniyadda Hay’adda ee sannadkan loo weeciyo si Qaxootiga Soomaalida dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo.
Dhagayso: Dr Mideeye iyo Hankiisa Hogaaminta Gobolada Dhexe